UZanele Mbokazi ucikwe nguDeborah Fraser | isiZulu
UZanele Mbokazi ucikwe nguDeborah Fraser
Durban - Ishaqise umsunguli wama-SABC Crown Gospel Awards inkulumo yesilomo somculi wowokholo uDeborah Fraser ayethule ngesikhathi kunenkonzo yesikhumbuzo kaLundi Tyamara, eGrace Bible Church, ePimville, eSoweto ngoLwesibili.
UNkk Zanele LaMbokazi Nkambule uthi kumshaqisile okushiwo yilo mculi ngesikhathi etshela izinkumbi zabantu ebezithamele le nkonzo ukuthi nguye ocelele uLundi ukuthi anqobe indondo yama-Crown.
UNkk LaMbokazi Nkambule utshele ILANGA LangeSonto ukuthi akakhumbuli nangelilodwa ilanga uDeborah ecelela uLundi indondo.
OLUNYE UDABA: #RIPLundi: "Noma ngabe unasifo sini, dlana imishanguzo yakho - uDeborah
"Ngisho noma ngabe ufikile kimina bekungeke kwenze mehluko ngoba sinekomidi elibhekela ukuklomelisa abaculi.
"Engikwaziyo wukuthi wonke umculi oklonyeliswayo usuke kumfanele ukunqoba hhayi ngoba ecelelwe. Mina ngingedwa angikwazi ukuwinisa umculi, lokho kuyaziwa," kusho uLaMbokazi Nkambule.
Uthi kumthusile okushiwo nguDeborah phambi kwabantu ngoba kwakha isithombe okungesona ngama-Crown.
"Ngeke ngiqambe amanga ngishaqeke ngempela ngoba abekusho anginalo ulwazi lwakho futhi angikhumbuli ngempela ekwenza," kuzihlangula uLaMbokazi Nkambule ongumengameli weWorld Gospel Powerhouse, othi ubengakulindele nhlobo okushiwo uDeborah.
Uthi uLundi unqobe izindondo ezimbili kuma-Crown okubalwa eye-Classic Of All Time ngengoma yakhe esihloko sithi "Mphefumulo Wam" ayinqobe ngo-2010 nenye ayinqobe ngo-2014 yeBest Gospel Music Video esihloko sithi "Noma Sekutheni Na?" Zombili lezi zindondo uthi uzinqobe ngoba zimfanele.
Ngakolunye uhlangothi uDeborah uthi usamile emaziwini akhe.
"Ngisasho namanje ukuthi yimina othathe uLundi ngamyisa kuZanele ngamcela ukuthi awinise uLundi. Angazi kungani ezothi akakhumbuli.
Lokhu ngikwenze ngemuva kokuba uLundi efike kimina ekhala ngokuthi ukhishwa inyumbazane kula ma-award," kusho uDeborah.
Uthi kuyamangaza ukuthi uLaMbokazi Nkambuli athi akakhumbuli.
"Kuningi engingakusho okwenzeka kulo mkhakha, abantu bafuna ukuvela bebahle kanti bayazi ukuthi benzani ngemuva. Uma ngingase ngikhulume kungathiwe ngithanda ukukhuluma kodwa iqiniso liyaziwa.
"Abantu abaphumele obala bakhulume amaqiniso," kusho uDeborah, enanela ngokuthi lo mkhakha wowokholo wonakele, udinga ukulungiswa.
"Abaculi babulawa ngabantu okumele ngabe bayabavikela, babakhulise kodwa yibo ababacindezelayo.
"ULundi ubengitshela yonke into, akukho abengakukhulumi nami ngakho ngazi konke nangendlela abezizwa ngayo ngezinto ebezenzeka empilweni yakhe," kusho uDeborah obezwakala ukuthi unengekile.
"Kuningi okwenzeka emfihlakalweni ngenhloso yokuthi sizothula sivikele abantu," kusho uDeborah enezela ngokuthi yena akasawahambi ama-Crown.
"Sekunesikhathi ngagcina ukuhambela umcimbi wamaCrown, nangonyaka owedlule bangiqokile kodwa ngangaya. Ningangithathi kabi, akukhona ukuthi nginenkinga nawo kodwa ezinye zezinto ezenzekayo angihambisani nazo," esho.
Wenqabile ukuphumela obala ngalezi zinto angahambisani nazo. Uthi uma inkampani yakhe isaqhubeka nokumfaka kulawa ma-award akanankinga kodwa ubulungiswa kumele benzeke.
Kulo nyaka kugujwa iminyaka eyi-10 kwasungulwa amaCrown, kanti uLaMbokazi Nkambule udalule ukuthi bazoba nohlelo oluzothatha unyaka wonke kuze kushaye usuku lomcimbi omkhulu wezindondo.
Mitchells Plain - 06:10:59 AM QUEUING TRAFFIC towards the M7 Highway Ezinye zasemigwaqeni